China Standard rewinder miaraka amina mpanamboatra mpanamboatra TTO | Baiyi
Anaran'ny vokatra: Rewinder mahazatra miaraka amin'ny mpanonta TTO
Endri-javatra:Izy io dia novolavolaina ho an'ny karazana fitakiana sarimihetsika sy fonosana. Raha ny fepetra takian'ny teknolojia fanontana marika nentim-paharazana sy ny kaody amin'ny labels dia nanandrana nanatratra "masinina iray misy fampiharana maromaro izahay, mety amin'ny famerenana horonantsary sy ny famerenana ny marika ihany koa izany". "Milina iray misy fiasa maromaro, mety amin'ny mpanonta printy TTO sy ny rafitra fanontana UV ihany koa". "Milina iray misy modular maromaro, modular amin'ny firafitra, ny mpampiasa dia afaka manao ny safidim-modular arakaraka ny takian'ny famokarana". Izy io no safidy tsara indrindra ho an'ny marika amin'ny horonana sy ny horonan-tsary amin'ny fangalarana ny horonan-taratasy.
Ity andiam-pirinty manan-tsaina sy famerenana amin'ny laoniny ity dia natao ho an'ny marika amin'ny horonan-tsary, horonan-tsary horonan-taratasy, taratasy ao anaty horonan-taratasy, marika tenona amin'ny horonana sns. Araka ny fitaovana ao amin'ny horonan-tsarimihetsika fanaingoana & famokarana horonan-tsarimihetsika ary ny teknolojia fampidirana karazana vokatra. Manenjika milina iray ho an'ny tanjona maro .—— afaka mametraka mpanonta printy mafana sy mpanonta UV sns "milina iray misy asa maro" —— manome fahafaham-po ireo karazana teknolojia takiana amin'ny karazana indostria. "Milina iray miaraka amina fanamorana" --— famahanana mitohy na miserana, rafitra dia maodely, ny olona afaka misafidy ny fikirakirana mifanaraka amin'ny filan'ny famokarana. Io no safidy tsara indrindra ho an'ny fitaovana ao anaty horonan-taratasy. Araka ny filan'ny indostria ankehitriny sy ny endri-teknolojia dia manana TTO fanavaozana fanodinana hafanana manara-penitra izy io, fanavotana UV fanontana mahazatra, famerenana haingam-pandeha. Azon'ny olona atao ny misafidy ny hampiasa CIJ, na mpanonta TIJ, mpanonta laser, mpanonta fantsona TTO ary rafitra fanontam-pirinty UV ho an'ny kaody arakaraka ny takian'ny kaody.
"Standard TTO thermal press rewinder" dia novolavolaina araka ny fisehon'ny teknolojia fanontam-pirinty mafana, miaraka amina roller TTO fanontana sy bracket fanaovana pirinty. Ny HMI dia mandray efijery misy loko 7INch, PLC ary micro PC ho an'ny fifehezana. Araka ny karazana sarimihetsika sy ny firafitry ny marika ary ny fahasamihafan'ny endri-javatra, ny olona dia afaka mametraka ny masontsivana miasa ao amin'ny HMI ary manara-maso ny satan'ny asa ary manome fanairana. Ny fanaraha-maso ny fihenan'ny un-winding sy ny fihodinan'ny rafitra, ny fampiakarana haingana / miadana, ny fisorohana ny fanidiana, ny marika fotsy na ny fanentanana ny marika maroloko, ny fanisana sns. Ny fiasa rehetra dia tena nahatsapa fifehezana manan-tsaina.
Ny fivoarana "fanontana UV fanodinam-bokatra UV" dia mifanaraka amin'ny endri-teknikan'ny rafitra fanontana UV, afaka mametraka rafitra fanontana, plasma ary fanasitranana LED izy io. Ny HMI dia mandray efijery misy loko 7 inch, PLC ary micro PC ho an'ny fifehezana. Araka ny karazana sarimihetsika sy ny firafitry ny marika ary ny fahasamihafan'ny endri-javatra, ny olona dia afaka mametraka ny masontsivana miasa ao amin'ny HMI ary manara-maso ny satan'ny asa ary manome fanairana. Ny fanaraha-maso ny fihenan'ny un-winding sy ny fihodinan'ny rafitra, ny fampiakarana haingana / miadana, ny fisorohana ny fanidiana, ny marika fotsy na ny fanentanana ny marika maroloko, ny fanisana sns. Ny fiasa rehetra dia tena nahatsapa fifehezana manan-tsaina. Ny "haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha" dia mifototra amin'ny rewinder mahazatra, ny hafainganam-pandeha dia nohatsaraina tokoa ary ny hafainganam-pandeha mety ho 100m / min. an'ny fotoana manokana.
Asa tsy azo atao: "manitsy ny rafitra auto"
1. rewra fanontana fanontam-pirinty TTO mahazatra
2. fanodinana UV fanontana mahazatra
3. rewinder haingam-pandeha
A. refy: L * W * H = 1200 * 1100 * 1200mm
B. lanja: 300KG
E. fahombiazana: manodidina ny 200 pcs / min (mila vokatra 100mm ho an'ny referansa izy io, misy ifandraisany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanontana ihany koa.)
F. hafainganam-pandehan'ny fehikibo: 2-60m / min (fanitsiana tsy tapaka)
G. haben'ny vokatra azo: sakan'ny fitaovana: 30-480mm, savaivony ara-nofo Max 500mm; Max lanja ho an'ny fitaovana 50KG
H. fanitsiana: rafitra manitsy (asa tsy voatery) ary ny marina dia ± 0.25mm
I. motera: motera servo
Vokatra J. azo alaina: BOPP, CPP, PET, PE, taratasy, sarimihetsika mitambatra, horonan-tsary vita amin'ny alumine sns sns amin'ny horonan-taratasy.
K. mamoaka fifehezana fihenjanana: fifehezana ny fihenjanana tsipika
L. fanaraha-maso fihenjanana fanangonana: fanaraha-maso henjana tsipika
M. fototra savaivony: 3inch (76mm)
Vatan'ny masinina N.: vy vy na vy karbonika misy sary hosodoko (azo namboarina ny loko)
O. fomba fametrahana: fametrahana apetraka amin'ny gorodona, ivelan'ny Internet.
P. asa tsy voatery: rafitra fanitsiana fiara.
A. refy: L * W * H = 1600 * 1150 * 1070mm
B. lanja: 800KG
E. fahombiazana: eo amin'ny 100-1000pcs / min (mila vokatra 100mm ho an'ny referansa izy io, mifandraika amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanontana ihany koa.)
F. hafainganam-pandeha mihazakazaka fehikibo: 10-100m / min (fanitsiana mitohy)
G. vokatra azo: sakan'ny fitaovana 30-440mm, savaivony ara-nofo 450mm; max lanja 50KG
I. motera: motera matetika matetika
K. mamoaka fifehezana fihenjanana: fifehezana tsy tapaka
L. fanaraha-maso fanenjanana fanangonana: fanaraha-maso tsy tapaka fihenjanana
Teo aloha: andian-dahatsoratra famahanana manan-tsaina
Manaraka: Masinina famahanana karatra mahazatra